जीवित पानीको शहर - प्रकाशमा चर्चको अन्तिम दर्शन - येशू ख्रीष्टको प्रकाश
मे २०, २०२२ मार्च १८, २०१९ द्वारा प्रकाशक
प्रकाशको अन्तिम अध्यायमा, मण्डलीको अन्तिम दर्शन देखाइएको छ, उहाँबाट बग्ने परमेश्वरको जीवन बग्ने नदीलाई जोड दिँदै। यसले के स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि जब येशू ख्रीष्टको प्रकाश पूर्ण रूपमा हुन्छ, र मानिसहरूको चर्च पहिचानका सबै आत्म-सुरक्षा धारणाहरू र एजेन्डाहरू हटाइन्छ, तब पवित्र आत्माको नदी बग्छ, र मानिसहरू पापको श्रापबाट पूर्ण रूपमा निको हुन्छन्। !
"अनि उहाँले मलाई जीवनको पानीको शुद्ध नदी देखाउनुभयो, क्रिस्टल जस्तै स्वच्छ, परमेश्वर र थुमाको सिंहासनबाट बाहिर निस्कन्छ।" ~ प्रकाश २२:१
यो इजकिएलमा भनिएको चर्च, आध्यात्मिक यरूशलेमको लागि हामीलाई देखाइएको भविष्यवाणीसँग पूर्ण रूपमा सहमत छ।
“त्यसपछि उहाँले मलाई फेरि घरको ढोकामा ल्याउनुभयो; अनि, हेर, घरको सँघारमुनिबाट पूर्वतिर पानी निस्किएको थियो। घरको अगाडिको भाग पूर्वतिर खडा भएको थियो, र वेदीको दक्षिणपट्टिबाट घरको दाहिने पट्टिबाट पानी तल झरेको थियो। त्यसपछि उहाँले मलाई उत्तरपट्टिको ढोकाबाट बाहिर ल्याउनुभयो र मलाई पूर्वपट्टि देखिने बाटोबाट बाहिरी ढोकासम्म लैजानुभयो। र, हेर, दाहिनेपट्टि पानी बगिरहेको थियो। जब उसको हातमा रेखा थियो त्यो मानिस पूर्वतिर गयो, उसले एक हजार हात नाप्यो र मलाई पानीबाट ल्यायो। पानी खुट्टासम्म पुग्यो। उसले फेरि एक हजार नाप्यो र मलाई पानीबाट ल्यायो। पानी घुँडा सम्म पुग्यो। उसले फेरि एक हजार नापे र मलाई ल्यायो। पानी कम्मरमा थियो। त्यसपछि तिनले एक हजार नापे। र यो एउटा नदी थियो जसलाई मैले पार गर्न सकिन: किनकि पानी बढेको थियो, पानीमा पौडिनको लागि, एउटा नदी जुन पार गर्न सकिँदैन। अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो, मानिसको छोरो, के तिमीले यो देख्यौ? त्यसपछि उहाँले मलाई ल्याउनुभयो, र मलाई खोलाको छेउमा फर्काउनु भयो। अब जब म फर्किएँ, हेर, नदीको किनारमा एकातिर र अर्कोतिर धेरै रूखहरू थिए। तब उहाँले मलाई भन्नुभयो, “यी पानीहरू पूर्व देश तिर बग्छन्, र मरुभूमिमा तल जान्छन्, र समुद्रमा जान्छन्। समुद्रमा ल्याइएका पानीहरू निको हुनेछन्। अनि यस्तो हुन जानेछ, कि बाँच्ने हरेक चीज, जो घुम्छ, जहाँ नदीहरू आउनेछन्, बाँच्नेछन्: र त्यहाँ माछाहरूको धेरै ठूलो भीड हुनेछ, किनकि यी पानीहरू त्यहाँ आउनेछन्: किनकि तिनीहरू निको हुनेछन्; र हरेक चीज बाँच्नेछ जहाँ नदी आउँछ। अनि यस्तो हुनेछ कि माछा मार्नेहरू एन-गेदीदेखि एन-एग्लैमसम्म त्यसमाथि खडा हुनेछन्। तिनीहरू जालहरू फैलाउने ठाउँ हुनेछन्। तिनीहरूका माछाहरू तिनीहरूको प्रकारअनुसार हुनेछन्, महासमुद्रका माछाहरू जस्तै, धेरै भन्दा धेरै। तर त्‍यसका चिसो ठाउँहरू र त्‍यसका मारिसहरू निको हुनेछैनन्। तिनीहरूलाई नुन दिइनेछ। अनि त्यसको किनारमा नदीको छेउमा, यस छेउमा र त्यस छेउमा, मासुको लागि सबै रूखहरू उम्रनेछन्, जसको पात ओइलाउनेछैन, न त फल खाइनेछ: उसले आफ्नो महिना अनुसार नयाँ फल ल्याउनेछ, किनकि तिनीहरूको पानी तिनीहरूले पवित्रस्थानबाट बाहिर निकाले: र यसको फल मासुको लागि हुनेछ, र यसको पात औषधिको लागि हुनेछ।” ~ इजकिएल ४७:१-१२
यी उही जीवित, निको पार्ने पानी र जीवनको रूख, हामी यहाँ पनि देख्छौं: चर्चको लागि प्रकाश दर्शनमा।
"यसको सडकको बीचमा, र नदीको दुबै छेउमा, त्यहाँ जीवनको रूख थियो, जसले बाह्र प्रकारका फलहरू फलाउँछ, र हरेक महिना फल दिन्छ: र रूखका पातहरू निको पार्नका लागि थिए। राष्ट्रहरू।" ~ प्रकाश २२:२
र भजनसंग्रहमा पनि:
"तपाईं पृथ्वीको भ्रमण गर्नुहुन्छ, र यसलाई पानी दिनुहुन्छ: तपाईंले यसलाई परमेश्वरको नदीले धेरै समृद्ध बनाउनुहुन्छ, जुन पानीले भरिएको छ: तपाईंले तिनीहरूलाई मकै तयार गर्नुहुन्छ, जब तपाईंले यसको लागि व्यवस्था गर्नुभयो।" ~ भजनसंग्रह ६५:९
यो सबै हो किनभने परमेश्वरको उपस्थिति साँचो मण्डलीको बीचमा छ। तपाईं यसलाई महसुस गर्न र महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको साथमा, तपाईंको आत्मा र आत्मामा उहाँको पवित्र आत्माको निको पार्ने प्रभावहरूको वास्तविकता।
"अनि अब कुनै श्राप हुनेछैन: तर परमेश्वर र थुमाको सिंहासन यसमा हुनेछ; अनि उहाँका सेवकहरूले उहाँको सेवा गर्नेछन्। तिनीहरूले उहाँको अनुहार देख्नेछन्। र उहाँको नाउँ तिनीहरूको निधारमा हुनेछ।” ~ प्रकाश २२:३-४
साँचो मण्डलीको आफ्नै पहिचान हुँदैन - तिनीहरूको निधारमा आफ्नै नाम। जब पहिचान संरक्षण चर्चको केन्द्रबिन्दु बन्छ, तिनीहरूले तुरुन्तै उहाँको अनुहारबाट आफ्नो आँखा हटाउँछन्, र "आफ्नै अद्वितीय" पहिचानमा दृढतापूर्वक ध्यान केन्द्रित गर्न थाल्छन्। तर मण्डली बन्न जारी राख्नको लागि, तिनीहरूले परमेश्वरलाई आफ्नो ध्यानाकर्षण हुन अनुमति दिनुपर्छ, ताकि तिनीहरूले बरु परमेश्वरसँग, पृथ्वीमा उहाँको मुक्तिको उद्देश्य लिनको लागि आह्वान, र दुवैसँग सम्बन्धित क्रसलाई चिन्न सकून्। यसैले तिनीहरूलाई देखाइएको छ: "उहाँको नाम तिनीहरूको निधारमा हुनेछ।" त्यसकारण तिनीहरूसँग भएको ज्योति प्रत्यक्ष रूपमा परमेश्वरबाट आउँछ।
"र त्यहाँ कुनै रात हुनेछैन; र तिनीहरूलाई कुनै मैनबत्ती चाहिन्छ, न सूर्यको प्रकाश। किनकि परमप्रभु परमेश्‍वरले तिनीहरूलाई ज्योति दिनुहुन्छ, र तिनीहरूले सदासर्वदा शासन गर्नेछन्।” ~ प्रकाश २२:५
जब हामीले येशूलाई स्पष्ट रूपमा देख्छौं: राजाहरूका राजा र प्रभुहरूका प्रभु, तब हामी स्पष्ट रूपमा देख्छौं कि हामी उहाँको अगाडि कसरी उभिनुपर्छ, र हामीले उहाँको सेवा कसरी गर्नुपर्छ: जीवनमा हाम्रो वास्तविक आह्वान के हो। किनकि यसले प्रकाश १:५ मा बताउँछ, येशू विश्वासयोग्य साक्षी हुनुहुन्छ।
"अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो, यी भनाइहरू विश्वासयोग्य र सत्य छन्: र पवित्र अगमवक्ताहरूका परमेश्वरले आफ्ना सेवकहरूलाई चाँडै गर्नुपर्ने कुराहरू देखाउन आफ्नो स्वर्गदूत पठाउनुभयो।" ~ प्रकाश २२:६
प्रकाश AD 90 को वरिपरि लेखिएको थियो। त्यसैले येशू ख्रीष्टको आध्यात्मिक प्रकाश र उहाँको मण्डलीलाई बन्द गर्ने कुरा पहिले नै देखाइएको थियो, विशेष गरी पेन्टेकोस्टको दिनबाट सुरु हुँदै। तर इतिहासको समयमा धेरै मानिसहरूको दर्शनलाई चर्चमा नियन्त्रण गर्ने मानिसहरूको कपटले बिगार्न सक्नेछ। त्यसैले यी अन्तिम दिनहरूमा परमेश्वरले यसलाई प्राप्त गर्न हृदय भएकाहरूका लागि प्रकाशलाई पूर्ण रूपमा खोलिदिनुभएको छ।
आफ्नो सारा हृदय, प्राण, दिमाग र शक्तिले उहाँलाई खोज्ने हरेक इमानदार हृदयको आत्मामा आफूलाई प्रकट गर्न परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ।
तपाईं ती मध्ये एक हुनुहुन्छ?
Note: this diagram below shows where the twenty-second chapter is within the full Revelation message. This final chapter shows the calling of the church, to flow living water out to the rest of the world. To better understandahigh level view of Revelation, you can also see the “प्रकाश को रोडमैप।"
कोटीहरू स्वर्गीय यरूशलेम, प्रकाश २२ ट्यागहरू स्वर्गीय स्थानहरू पोस्ट नेभिगेसन